Original Premium Skin Case for ruggedized BlackBerry 9360 / 9370 Curve — Everything for BlackBerry. InfoResheniya / bbry.net
Original Premium Skin Case for ruggedized BlackBerry 9360 / 9370 Curve
It siqukethe izingxenye ezimbili zokuphepha: thick abicah-based futhi isikhathi eside plastic uzimele. Yilokhu udinga ukuqinisekisa kudivayisi yakho ukuvikeleka esiphezulu ngokumelene imihuzuko, imihuzuko, uhlevane ekwindla. ukubukeka stylish. Izinketho zemibala Different.
Original Premium Skin Case for ruggedized BlackBerry 9360 / 9370 Curve — yilokho udinga ukuqinisekisa kudivayisi yakho ukuvikeleka esiphezulu ngokumelene imihuzuko, imihuzuko, uhlevane ekwindla.
Case siqukethe ezimbili izingxenye zokuzivikela — aminyene abicah base kungathambisa igalelo ekwindla, okuyinto esigqokwa phezu luhlaka lepulasitiki umthelela ukumelana. ekuvikeleni Ngokugcwele ebusweni ezingemuva ifoni, icala ushiya vula front okuyingxenye (ikhibhodi, screen), njengoba kwakunjalo imigodi USB nezimbobo audio, ikhamera. Linikeza ukufinyelela okusheshayo futhi ukhululekile ukuba izingxenye ifoni yakho, udinga ukuba umsebenzi evumela ukuthi wena ukuba usebenzise ucingo ngendlela evamile.
Isembozo original wamandla anda Premium Skin BlackBerry 9360 / 9370 Curve has a ezihlukahlukene inhlanganisela yemibala: ungakhetha elula futhi ithafa noma stylish okungafani inhlanganisela — Kulokhu kusiza umphelelisi BlackBerry yakho!
Original Premium Skin Case for ruggedized BlackBerry 9360 / 9370 Curve, Black / Black (Black / Black) ACC-39406-301 ●
Original Premium Skin Case for ruggedized BlackBerry 9360 / 9370 Curve, Black / Purple (Black / Purple) ACC-39406-302 ●
Black / Black (Black / Black) ACC-39406-301
Black / Purple (Black / Purple) ACC-39406-302